Matías Vecino oo tijaabada caafimaad ugu maraya Inter Milan €24m. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Matías Vecino oo tijaabada caafimaad ugu maraya Inter Milan €24m.
Matías Vecino oo tijaabada caafimaad ugu maraya Inter Milan €24m.
Posted by: radio himilo August 1, 2017
Muqdisho – Ciyaaryahanka qadka dhexe ee Matias Vecino ayaa tijaabada caafimaadka u maraya Inter Milan maanta oo Talaada ah kahor inta uusan €24 milyan kaga dhaqaaqin Fiorentina, sida uu sheegay Gianluca Di Marzio.
25-sano jirkan ayaa buugaagta Florence galay markii qandaraas Stadio Artemio Franchi uu la meel-dhigay ilaa 2021ka ah, si kastaba Vecino ayaa dhameystiri doona in uu ku biiro San Siro toddobaadkan.
Ciyaaryahankan ayaa kubadiisa ku horumariyay kulankiisii ​​amaahda uu ugu biiray Cagliari iyo Empoli, waxa uu qeyb muhiim ah ka ahaa qadka dhexe kooxda ka dhisan Tuscany labadii xilli-ciyaareed ee ugu danbeysay, 61 kulan oo uu saftay Serie A.
Inkasta oo xiddiga heerka caalami ee dalka Uruguay uu kaliya dhaliyay shan gool sidoo kalana caawiye ka noqday shan kale labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay, waxa uu awood u leeyahay shaqada daafaca ama ka ciyaaridda daafaca isaga oo diiradda u saarnaa Luciano Spalletti.
Inter ayaa dhacday kooxda ay isku magaalada yihiin ee AC Milan xagaagan suuqa kala iibsiga, iyadoo labada kooxoodba ay u baahan yihiin inay dib ugu soo celiyaan Magacooda ka lumay qaarada Yurub kubadaha laga ciyaaro.
Mar hore ayuu dhameystirtay saxiixa Borja Valero qiimo dhan £ 4.7m, Vecino ayaana qarka u saaran inuu kula biiro kooxda Fiorentina ninka ay saaxiibka ku ahaayeen Nerazzurri xilli ciyaareedka soo socda.
Previous: Diego Costa oo aan wali imaan tababarka kooxda Chelsea.
Next: Chelsea oo doonaysa Danny Drinkwater.